Vaovao - Vonona hianatra bebe kokoa momba ny milina CNC?
1.Inona ny Machining CNC?
Ny fizotry ny CNC dia ny fanafohezana ny "fifehezana isa nomerao amin'ny solosaina", izay mifanohitra amin'ny fetran'ny fifehezana ny tanana, ka manolo ny fetran'ny fifehezana ny tanana. Amin'ny fifehezana amin'ny tanana, ny mpandraharaha eo an-toerana dia takiana mba hampandeha sy hitarika ny fanodinana amin'ny alàlan'ny baiko fifaliana, bokotra, ary kodia Tool Tool. Ho an'ny mpitazana, ny rafitra CNC dia mety hitovy amina singa informatika mahazatra, saingy ny programa sy ny rindrambaiko ampiasaina amin'ny milina CNC dia manavaka azy amin'ny endrika computation hafa.
2. Ahoana no fiasan'ny masinina CNC?
Ny fitaovana milina CNC dia manaraka ny torolàlana momba ny rindrambaiko solosaina efa voalahatra. Ny programa dia mamaritra ny hafainganana, ny fivezivezena ary ny toeran'ny masinina hahatratrarana endrika endrika manokana. Ny fizotran'ny famolavolana CNC dia misy ireto manaraka ireto:
Miasa amin'ny CAD: Ny mpamorona dia mampiasa rindrambaiko famolavolana fanampiana amin'ny alàlan'ny solosaina (CAD) hamoronana sary 2D na 3D. Ny rakitra dia misy ny famaritana toy ny firafitra sy ny refy, izay hilaza amin'ny milina CNC ny fomba hamoronana ilay ampahany.
Avadiho ny rakitra CAD amin'ny kaody CNC: Satria ny rakitra CAD dia azo ampiasaina amin'ny rindranasa marobe, ny mpamorona dia mila manova ny sary CAD ho rakitra mifanaraka amin'ny CNC. Afaka mampiasa programa toa ny rindrambaiko mpanampy amin'ny alàlan'ny solosaina (CAM) izy ireo hanovana ny endrika CAD ho endrika CNC.
Fanomanana milina: Aorian'ny fisiezan'ireo mpandraharaha fisie rakitra dia afaka manangana irery ilay milina izy ireo. Mampifandray ireo sanganasa sy fitaovana mety izy ireo mba hampandeha tsara ilay programa.
Fanatanterahana ny dingana: aorian'ny fiomanana ny rakitra sy ny fitaovana milina dia afaka manatanteraka ny dingana farany ny mpandraharaha CNC. Manomboka ny programa izy ireo ary avy eo mitarika ny masinina mandritra ny dingana rehetra.
Rehefa vitan'ny mpamorona sy ny mpandraharaha ity dingana ity araka ny tokony ho izy, ny fitaovan'ny milina CNC dia afaka manatanteraka ny asany amin'ny fomba mahomby sy marina.
3. Ahoana no fiasan'ny masinina CNC?